China Inconel 718 Tunging hanger ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Sekonic
Inconel 718 Tubing Hanger / Oil Tubing ကြိုးကွင်း
♦ ပစ္စည်း: Inconel 718
♦ ဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး ဆွဲ
♦ ဖောက်သည်များ၏ပုံသဏ္oilာန်အရရေနံစိမ်းကြိုးကွင်းကိုထုတ်လုပ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပစ္စည်းမှာ Inconel 718၊ Inconel 725, Monel 400 နှင့် Inconel x750၊ သူတို့သည်အပူပေးကုသမှုအခြေအနေ၊ Dimension နှင့် tolearnace တို့ဖြစ်သည်။
Inconel® 718အပူနှင့်ထိတွေ့နိုင်သော 1300 ° F (704 ° C) ရှိသောမိုးရွာသွန်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသောနီကယ် - ခရိုမီယမ်သတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလူမီနီယမ်နှင့်တိုက်တေနီယမ်ပမာဏအနည်းငယ်သာပါဝင်သောသံ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွနှင့် molybdenum ပါဝင်သောသံမဏိများလည်းပါဝင်သည်။ နီကယ်သတ္တုစပ်သည်အခြားမိုးရွာသွန်းမှုခိုင်မာစေရန်အခြားမိုးရွာသွန်းမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်အတန်ကောင်းသောဂဟေဆော်နိုင်မှု၊ ပုံစံပြုခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော cryogenic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဒီအလွိုင်း၏နှေးကွေးမိုးရွာသွန်းမှုခိုင်မာတုံ့ပြန်မှုကမာကြောခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲအလွယ်တကူဂဟေဆော်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလွိုင်း ၇၁၈ သည်သံလိုက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောချေးခြင်းနှင့်ဓါတ်တိုးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၁၃၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ (၇၀၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထိပြင်းထန်သောဖိအားပေးမှုနှင့်ဓာတ်တိုးနိုင်မှု ၁၈၀၀ ° F (982 ° C) လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
Inconel 718 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
Inconel 718 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
8,24 ဂရမ် / cm³
Inconel 718 Alloy နိမ့်ဆုံးစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အခန်းအပူချိန်
Inconel 718 Sekonic သတ္တုများအတွက်ရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်
Inconel 718 ဘား & လှံတံ
Round bars / Flat bars / Hex bars, Size 8.0mm-320mm မှသော့ခလောက်၊ စွဲစေခြင်းနှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်
Inconel 718 ဂဟေဝါယာကြိုး & နွေဝါယာကြိုး
Inconel 718 အဝတ်လျှော် & gasket
Inconel 718 စာရွက် & ပန်းကန်
Inconel 718 ချောမွေ့သောပြွန် & ဂဟေဆော်သောပိုက်
Inconel 718 နွေ ဦး
ဖောက်သည်များပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်အရ AMS5699 စံနှုန်းများနှင့်အတူနွေ ဦး ရာသီ
Inconel 718 ချွတ် & ကွိုင်
အလွိုင်း 718 ဓာတ်ငွေ့ပြွန်ချိတ်ဆွဲ
ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်သောသည်းခံမှုနှင့်အတူ smaples မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဖောက်သည်များ၏သတ်မှတ်ချက်အရ Bolt များ၊ ဝက်အူများ၊ အနားကွပ်များနှင့်အခြားရှေ့မီးများပုံစံများကို Alloy 718 အမျိုးအစားများ။
အဘယ်ကြောင့် Inconel 718?
Inconel 718 သည် Austenitic ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေပြီး“ γ” သည်စက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်အထူးသဖြင့် inoxidability သည်ပြင်းထန်သောချေးခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်အပူပေးမှုတွင်အကောင်းဆုံးသောပလပ်စတစ်ဖြစ်စေသည့် G မိုးရွာသောနယ်နိမိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
2. ဆန့်ဆန့်မှုဆန့်စွမ်းအား၊ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား၊ တွားသွားသတ္တဝါနှင့် ၇၀၀ at တွင်ပြတ်တောက်သောခွန်အား။
၃.၁ မြင့်မားသော inoxidability at1000 ℃။
အနိမ့်သောအပူချိန် 4.Steady စက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်။
Inconel 718 လျှောက်လွှာ field
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်မှု၊ အလွန်မြင့်မားသောချေးခံနိုင်မှုနှင့် 700 ℃ဂုဏ်သတ္တိများရှိလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်မြင့်မားသောလိုအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသည်။Inconel အဆင့်များသည်အလွန်ပြင်းထန်သောပတ် ၀ န်းကျင်များ၌အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ turbocharger rotors & seals၊ လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်များအတွက်မော်တာရိုးတံများ၊ ရေနွေးငွေ့မီးစက်များ၊ အပူလဲလှယ်သူများအတွက်ပြွန်များ၊ သေနတ်သံဖိနှိပ်စက်များနှင့်သေနတ်များ။ , လေယာဉ်ပျံထဲမှာအနက်ရောင် box ကိုအသံဖမ်းစသည်တို့
• Cryogenic အင်ဂျင်နီယာ
ရှေ့သို့ Inconel 625 Disc Ring / Joint Ring / အဝတ်လျှော် / gasket
နောက်တစ်ခု: စတိတ် ၆ / စတိတ် 6B / စတီကျူ ၁၂ ခုအဆို့ရှင်ထိုင် / လက်စွပ်
Inconel 718 စွဲစေ
inconel 718 ပြွန်ကြိုးကွင်းထုတ်လုပ်
ပိုက်ကြိုးကွင်း Inconel 718
Inconel 625 Disc Ring / Joint Ring / အဝတ်လျှော် / gasket
Hastelloy X UNSN06002 စာရွက် / ဘား / ပိုက် / Plate / များအတွက် ...
ဟေး 25 ဝါယာကြိုး, ဂြိုလ်တု 6, ဂဟေဝါယာကြိုး, ဂြိုလ်တု 6B, ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, အလွိုင်း R26 မူလီ,